Deg Deg: Furitaanka Shir waynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo dib loo dhigay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Deg Deg: Furitaanka Shir waynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka...
Deg Deg: Furitaanka Shir waynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo dib loo dhigay
Shir weynaha qaran ee daah furka dib u eegista Dastuurka Dalka oo lagu waday in maalinnimada berrito ah uu si rasmi ah uga furmo magaalada Muqdisho ayaa la shaaciyey in dib loo dhigay.
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil, ayaa sheegay in dib loo dhigay furitaanka Shir weynaha qaran ee daah furka dib u eegista Dastuurka kaasi oo qorshihiisu ahaa in uu maalinnimada berrito oo ay taariikhdu ku beegan tahay 08da October uu ka furmo magaalada Muqdisho.
Shir weynahan oo daah fur u ahaa qorshaha dib u eegista Dastuurka Dalka ayaa waxaa mudooyinkan qaban qaabadiisa waday Wasaaradda Dastuurka ayaa waxaa loo qorsheeyey inay ka qeybgalaan ku dhowaad 500 ruux oo qeybaha bulshada, siyaasiyiin iyo qurbo joog isugu jira ayadoo ololahanna ku talagalkiisu yahay in uu socdo mudo laba sano ah.
Ilaa iyo hadda lama sheegin sababta keentay in dib loo dhigo shirkaasi, hase ahaatee waxaa maanta ka qayb galka shir waynahaasi qaadacay maamul Gobaleedyada dalka iyo guddiga dib u eegista Dastuurka KMG ah ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo sheegay in shirkaasi uu caqabad ku yahay Geedi socodka howlaha dib u eegista Dastuurka.
Previous articleGuddiga dib u eegista dastuurka oo gaashaanka ku dhuftay ka qayb galka shir barri ka dhacaya Muqdisho
Next articleGuddiga Midowga Yurub oo diiday inuu ka hadlo dhibaatada Rohingya